Iwata ရဲ့ airbrush လမ်းညွှန် - မှုတ်ဆေး ၄ နည်း
“ ဆေးမှုတ်ရန်နည်းလမ်း ၄ ခု” - ဤသည်မှာဂျပန်လေယာဉ်ကွင်းထုတ်လုပ်သူ Iwata မှစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသဘောတရားအသစ်၏အမည်ဖြစ်သည်။ စတင်တည်ထောင်သူများအတွက်ခက်ခဲသော်လည်းအထူးသဖြင့်အထောက်အကူပြုသည့်ခြေလှမ်းကိုကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ဤနေရာတွင်ရည်မှန်းချက်မှာ airbrushes ကိုစိတ်ဝင်စားသူများအား airbrush မော်ဒယ် ၃၀ ကျော်၏သီးခြားယူနစ်တစ်ခုစီ၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အားသာချက်များကိုကောင်းကောင်းကြည့်ရှုရန်၊ ထို့ကြောင့်သူနှင့်သူမ၏တစ် ဦး ချင်းလိုအပ်ချက်များအတွက်ရွေးချယ်ခြင်းကိုရိုးရှင်းစေသည်။ အားကစားလောကမှအလားတူစနစ်များကိုသင်သိကောင်းသိလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာတင်းနစ်ကွင်းသည်၎င်း၏လျင်မြန်မှုသို့မဟုတ်တိကျမှုအရစကေးနှင့်ကွဲပြားနိုင်သည်။
Iwata ရေမှုန်ရေမွှား။ ကွဲပြားခြားနားသောသုတ်ဆေးအမျိုးမျိုး၏အရာဝတ္ထုများ၏ဂျီ ometric မေတြီကွဲပြားမှုအရအောက်ပါနည်းလမ်းများကိုဂျပန်နိုင်ငံတွင် Iwata မှုန်ရေမွှားသေနတ်ကိုင်အသုံးပြုရန်အသုံးပြုသည်။
1. Transverse မှုန်ရေမွှားနည်းလမ်း။ အဆိုပါမှုန်ရေမွှားပုံစံကိုဖြောင့်သည်။ ပက်ဖြန်းသေနတ်ကိုလက်ျာလက်ဖြင့်ကိုင်ထားပါ။ အော်ပရေတာ၏ဘယ်ဘက်အခြမ်းမှစတင်ပါ၊ spanner ကိုဘယ်ဘက်မှညာသို့ရွှေ့ပါ။ အမြန်ပတ်ပတ်လည်ကိုဆင်းနှင့် left လုပ်ပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်အဆစ်မျက်နှာပြင်သည် ၁/၂၊ ၁/၃ နှင့် ၁/၄ ဖြစ်ပြီး ၄ င်းကိုအမိုးအမျိုးအစားနှင့်အညီကျွမ်းကျင်နိုင်သည်။ oneရိယာတစ်ခုပြီးဆုံးသွားသောအခါအခြားမျက်နှာပြင်ကိုအစဉ်လိုက်ဖြန်းပါ။ ဓလေ့ထုံးတမ်းအရပက်ဖြန်းခြင်းကိုဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောအော်ပရေတာ၏အောက်ပိုင်းညာဘက်မှအထက်ဘက်သို့လည်းဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
2. longitudinal မှုန်ရေမွှားနည်းလမ်း။ ဂျပန်နည်းသည် Iwata ပက်ဖြန်းသေနတ်၏ပုံစံကိုအလျားလိုက် ဦး တည်ချက်သို့ပြောင်းလိုက်ပြီးမှုတ်ဆေးသည်လက်ဝဲ၊ အပေါ်၊ အထက်မှညာဘက်နှင့်အောက်ဘက် မှလွဲ၍ အခြားနည်း မှလွဲ၍ အလျားလိုက်ပက်ဖြန်းခြင်းနည်းလမ်းနှင့်ဆင်တူသည်။ သင်တို့သည်လည်းအောက်ခြေညာဘက်သို့မဟုတ်ဘယ်ဘက်အောက်ခြေကနေနောက်ကျောနှင့်ထွက်ပြေးနိုင်ပါတယ်။
3. ဒေါင်လိုက်နှင့်အလျားလိုက်လက်ဝါးကပ်တိုင်နည်းလမ်း။ ပက်ဖြန်းသည့်အခါ, longitudinal နောက်ကျောနှင့်ထွက်လေပေါ်မှာပ။ ဒုတိယအကြိမ်ပက်ဖြန်းသောအခါအပြန်အလှန်အပြန်အလှန်ဖြန်းပါ။ ပုံဆွဲသည့်နေရာကိုအချိန်တိုင်းပြောင်းလဲပါ။